Xagee ku dambeyn doontaa sadex-geesoodka Af-Mandiila (Q. 2-aad)
Oct 19, 2011 - jawaab	Number of View: 433Share
Nairobi (S. News Network) Waa anigii idiin sheegay inaan qormadan kusoo qaadi doono sababaha ay isku khilaafsan yihiin Bootoole iyo Bulbul-Raamoole.
Bulbul-Raamoole wuxuu ku fekerayaa hadii magaalada Af-Mandiila uu xukunkeeda la wareego Miigane armaa weerar kaaga yimaadaa? armay canaasiirta kugu kacsan kugu soo xoogaystaan? waxaasaa maskaxdiisa ka guuxaya.
Bootoole isagu cabsidaas kuma jirto wuxuu ku fekerayaa Illaahow Gari-Magasho meesha kasaar aan halmar hurdo fiican ladee, wuxuu kaloo ku taamayaa inuu macdan lagu sheegay xeebaha Somalia u raadsado qaabkii uu goobtaas macdanta lagu sheegay ku yeelan lahaa, laakiin waxaa ka horeysa indha-badan oo soo eegaya inuu iska leexiyo, waana sababaha uu Somalia u yimid hadda.
Bubul-Raamoole laftiisu kama maqna fekerka ah inuu helo meel uu wax kala soo dago oo dhulka Somalia ah,taasaana ugu daran hadda, laakiin ahmiyadda koowaad wuxuu siinayaa inaan xoog isaga kasoo horjeeda aysan qaban maamulka Af-Madiila.
Bootoole iyo Bulbul-Raamoole waa iska warqabaan ujeedooyinka Af-Mandiila la isugu haysto, Miigane iyo Guul-wadena waa is-ogyihiin nin waliba qofka dhabarkiisa taagan, hada waa lakala xishoonayaa oo Af-Madiila gacan lagu mahayo, waxaana lawada sitaa shaatigii Ujeedo-Xun.
Ujeedo-Xun iyadu waxba kama dhihi karto mustaqbalka waxa kasoo socda magaalada Af-Madiila, laakiin waxay qabanqaabinaysaa inay gacan xoogan ku yeelato in si isku dheeli-tiran wax loo qaybsado, laakiin Miigane isagu yeeli maayo markaan oo wuxuu leeyahay Af-Mandiila kaadidayda ayaan usoo cabay.
Guul-Wade isaguna wuxuu leeyahay Af-Mandiila hadii maamulkeeda lagaala wareego nololba ma haysatid!! waana meeshii ubad badan oo aad lahayd aad ku duugtay!.
Warmooge isagu juuqba-maleh duco ayuu hoosta ka wadaa oo wuxuu leeyahay “Allow maamulka Af-Madiila qolo kuu dabacsan gacanta u gali”. Waxaa soo socota sida wax u socdaan marka la saadaaliyo in Guul-Wade iyo War-mooge isfahmi doonaan, sababtoo ah Miigane sanadkan calankiisuu wataa oo cidbaa kaa saraysa ama dad kalaa Af-Mandiila kugu qabsan kara ma aaminsana, wuxuuna leeyahay ma meeshaan kaadidayda usoo cabay baa la igu qabsan karaa? isagaa isku jawaabaya “MAYA”.
Lasoco qaybta soo socota iyo sababaha keeni kara in Warmooge iyo Guul-wade isfahmaan.